June 2013 - पेटबोली ...!
Monthly Archive:: June 2013	Sort Posts by:
पत्रकारिता, व्यङ्ग साहित्य
नहाँसौं भन्छु हाँस उठिहाल्छ। सकेसम्म त दबाउन खोजेकै हो नि, नसकेपछि के गर्नु त मैले ! नेपालको कानून पालना गराउन लागि परेको नेपाल प्रहरी, अदालतलाई देखेर खित्का छुटिहाल्छ। अस्ति राती अनलाइन न्यूज पोर्टलहरू हेर्दा हेर्दै फ्याट्ट समाचार आयो ‘भ्याण्टाको समाचार लेख्ने पत्रकार पक्राउ’ भनेर। दुईदिनदेखि ‘दूध’को समाचारले	Tweet
मरेको पुरानो ब्लगमाथि सौता हाल्ने बेला नयाँ ब्लगको नाम के राख्ने होला भनेर धेरै गम खाइयो। मलाई लेखाईमा थोरै व्यंग्य घुसाउन मन पर्ने। त्यसैले सोचेँ नाम पनि अलि त्यस्तै व्यंगात्मक होस्। मेरो दिमाग क्रियटिभ हैन भन्ने त थाहा थियो तर यति निकम्मा छ भन्ने चाहिँ पहिलोपटक थाहा	Tweet
एउटा अन्त्य !
०६७ सालको मंसिर महिना ! समय दिनको ३ बजे !! स्थान: काठमाडौं उपत्यकाको कुनै एउटा निजीसंस्था। अशोक अफिसमा कुनै किताबको सम्पादन गर्दै थियो। फोनमा आँखा पर्‍यो, ‘झरना कलिङ्…’। ‘हेलो… सुनन… उनीहरूले सबै कुरा घरमा भनिदिए। मलाई टेन्सन भो। मैले के भनम् अब?’ झरनाको रूञ्चे स्वर। ‘हँ, के	Tweet
ब्लफ कल !
यो मोबाइल भन्ने जिनिशको जति फाइदा छ त्यति नै बेफाइदा। कहिलेकाहीँ दुई तीन दिनसम्म फोनको घण्टी नै बज्दैन। अनि घरीघरी फोन हेर्नुपर्छ- स्वीच अफ पो छ कि वा बिग्रियो कि भनेर। कहिले भने वाक्कै लाग्दो गरी बज्छ त्यो पनि बिनाकाममा। ब्लफ कलका त कुरै नगरौं। यहाँ मेरो	Tweet
SLC: एकचालीस प्रतिशत उतिर्ण
परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानो ठिमी भक्तपूरले एसएलसी-२०६९/७० को नतिजा प्रकाशित गरेको छ। यो साल विगत सात बर्षमै सबैभन्दा कम ४१.५७ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तिर्ण भएका छन्। गत चैतमा भएको परीक्षामा नियमित तर्फ ४ लाख ३० हजार ९७ र एक्जाम्टेडतर्फ १ लाख १७ हजार ६८ गरी जम्मा ५ लाख ४७	Tweet
सेतोपाटी, खबरपाटी, रातोपाटी, कालोपाटी। मिनिबस, सेतो माइक्रो, निलो माइक्रो, सफा टेम्पो भनेजस्तै 😀 मिनीबस: सीट संख्या धेरै। ठूल्ठूला लगानीकर्ता। चलाउने ड्राइभर पनि अनुभवी। कण्डक्टर/खलासी पनि बलियो, हट्टाकट्टा, अनुभवी 😉 चक्रपथ परिक्रमा गर्ने मिनीबस के। न त यसलाई कुनै हतार छ, न त तोकेको समयमा नै पुग्नै छ	Tweet
बाबु छोरा: संस्कारको कुरो
एकपटक बिबिसीका बंगलादेश करेस्पोण्डेन्टसँग काम गर्दा उनले भनेको एउटा कुरा “Asajournalist you Should be very attentive and clever to know what’s happening around you either you are in duty or outside” ले मेरो दिमागमा गहिरो छाप पारेको छ। उनीसँग रिपोर्टिङ् गर्दै गर्दा एउटा घटनामा मेरो	Tweet
ब्लग र म: बिछोडको पिडा
आफूसँग जोडिएका वस्तुहरू अति प्रिय लाग्छन्, सायद सबैलाई। निर्जीव हुन या सजीव, यिनीहरूसँगको ‘अट्याचमेन्ट’ बडो भावनात्मक हुन्छ। मोबाइल, ल्यापटप, आईपड, ईअरफोन जस्ता ग्याजेटहरूसँग त झन् छुट्टिनै मन लाग्दैन। दुई मिनेटका लागि पनि कसैले आफ्नो ल्यापटप चलायो भने आफ्नी श्रीमती/गर्लफ्रेण्डसँग अर्कोले अँगालो हालेर गफ गरेको जस्तो लाग्छ। त्यो	सामाजिक सन्जाल	अनन्त कोइराला